indlwane eluhlaza okwesibhakabhaka
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe ongu鳳珊
Ikhaya lika-Auntie Tai yindawo yokuphumla yabakhweli.Ibekwe kufutshane neSikhululo sikaloliwe saseChaozhou kunye nesikhululo sokudluliselwa.Ngumbindi wedolophu, kodwa ikwindawo ezolileyo nekhuselekileyo. Imalunga ne-2.7 yeekhilomitha ukusuka kwi-88 Expressway. Iimarike ezimbini zemveli kunye nemarike yasebusuku ziimitha ezili-100 kuphela kude. Ukutya okuluncuthu okudumileyo kwalapha kukuphakathi kweemitha ezingama-500, kumgama wokuhamba. Indawo yokutyela yaseNiu Dafu edumileyo eChaozhou "isemva" kwendlu kaTai.
Igumbi lethu alikho likhulu, kodwa likhaya elinobuhlobo, linamagumbi amane kunye negumbi lokuhlala elincinane, kungekhona indlu okanye indlu enkulu. Ukuba uthanda ukulula, wena okanye usapho lwakho wamkelekile.
Umphandle kunye nongaphakathi wendlu yethu zigcinwe njengoko zazinjalo.Indawo iyonke imalunga neepings ezingama-60. Kukho amagumbi amane kunye namagumbi okuhlala amancinci amabini, ibhalkhoni encinci kumgangatho wesibini kunye nebhalkhoni enkulu kumgangatho ongaphezulu, enamagumbi okulala amabini. ngabanye isasazwe phezu nakwimigangatho yokuqala, eyesibini, neyesithathu.. Indawo ye-2/3 kumgangatho wokuqala yenye indawo yokuhlala yosapho lwethu.
Njengoko ifoto ibonisa: igumbi lethu elilula nelicocekileyo linoxolo ngaphandle kokuba iindwendwe zethu zinengxolo ngokwazo lol ^^
Elinye lamagumbi amancinci akwi-attic anokonwaba kancinci.Kufanelekile ukuba iintsapho ezinabantwana okanye abahlobo ababini okanye abathathu babelane ngegumbi.Ngabantwana kuphela ekufuneka bathathele ingqalelo ukhuseleko, kungenjalo ayikhuthazwa.
Ukongeza, ngenxa yengxaki yokuba abanye abaqeshi kufuneka beze nezilwanyana zasekhaya, ukuba izilwanyana zasekhaya aziyi kuphazamisa ukuzola kwabanye abahlali kunye nabamelwane, kwaye zinokugcina igumbi licocekile kwaye lingenangcoliso, ngoko ke sinokubonelela ngeendawo ezithile ukuze izilwanyana zasekhaya zibe nendawo ekhuselekileyo. indawo, ezifana kwivaranda kumgangatho wesibini kunye Top umgangatho ibhalkhoni.
Imalunga neemitha ezingama-450 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseChaozhou, kwaye malunga neemitha ezili-100 ukusuka kwiMarike yaseZhongzheng kunye neMarike yaseDusk.Isitrato esidumileyo sokutya sendawo eChaozhou siphakathi kweemitha ezingama-300-500. Umsebenzi wobomi bekhaya likaTaiyi uphezulu kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- 鳳珊
Ewe, ndiyakonwabela ukunxibelelana neendwendwe kuba umbono wam uyanda neendwendwe ezikude. Nangona kunjalo, ndizihlonela ngakumbi iimfuno zabaqeshi, ndibavumela ukuba bathule kwaye baphumle kakuhle.